chandu2007.blogspot.com: 10/1/07 - 11/1/07
पालामको मूर्च्छना’ पढेपछि
हुन त एक दिन अवश्यै पनि हाम्रो भेट हुने नै थियो । मजस्तै नै, प्रकाश पनि कविता कोर्न रुचाउने मान्छे र कवि भएको कारणले गर्दा नै कवि गोशथी, कविहरुको जमघट र कवितासम्बन्धि सेमिनारहरुमा पुगी राख्ने कवि हुन् । तर हाम्रो पहिलो भेट यसरी होला भनेर मैले सोचेको पनि थिईँन । चैत ३० गते २०६३ साल, शुक्रबारको दिन पाटनढोकास्थित यलमाया केन्द्रमा हिमाल एसोसिएसनद्वारा नेपाली कविता डटकमको सहयोगमा ‘वर्षान्त कविगोष्ठी’ को कार्यक्रम थियो । नेपाली कविता डटकमका संचालक कवि श्री विक्रम सुब्बामार्फत जानकारी पाएपछि त्यहाँ जाने योजना बनाएँ । यसरी ‘वर्षान्त कविगोष्ठी’मा युवा कवि प्रकाश थाम्सुहाङसित मेरो पहिलो भेट र चिनजान भयो र कार्यक्रमपछि प्रकाशको पहिलो कवितासंग्रह ‘पालामको मूर्च्छना’ मसित मेरो डेरा कोठा आई पुग्यो ।
बैशाख १ गते २०६४ साल शनिबारको दिन म धरान जान्दैथिएँ त्यसैले बाटोमा पढ्नका लागि आफ्नो बैगमा ‘पालाम्को मूर्च्छना’ पनि हालें । जब गाडी थानकोटको ओह्रालो आई पुग्यो, तब म पनि त्यो कविता संग्रह निकालेर पढ्न थालें । गाडी र समय चिप्लेको थाहा नै भएन । गाडी हैटौंडा आईपुग्दा म पनि संग्रहको अन्तिम कविता ‘आदिम आवाज’ मा आई पुगेछु । तर धरानसम्मको यात्राभरि दुई-तीन पटक ती कविताहरु पढी नै रहें । यो संग्रहमा मात्र २० ओटा कविताहरु छन् । प्रकाशको कविताबारे कवि विष्णुविभु घिमिरे लेख्नु हुन्छ-धेरै लेखेर पनि कहिले केही लेखिँदो रै’नछ , तर कहिले थोरै लेखेर पनि सबै लेखिँदो रहेछ । ‘पालामको मूर्च्छना’ पढिसकेपछि मलाई पनि यस्तो नै लाग्यो । पछि प्रकाशसितको भेटमा मैले २० ओटामात्रै कविता राखेको कारण खोतालें र उनले सजिलो जवाब दिए-पाठकले कविता पढ्न नरुचाउने समयमा धेरै कविताहरु राखेर संग्रह निकाल्न पनि बेकार नै छ । हुन पनि हो, अचेलको व्यस्त समयमा कविता पढने फुर्सद कोसित नै छ ! तर मेरो भनाइको मतलब कविताहरु बिल्कुलै नपढिने भनेको चाहिं पटक्कै होइन ।
प्रकाशको कविता संग्रहमा धेरै विशेषताहरु छन्-एउटा विशेषता हो थोरैमा धेरै समेट्न सक्नु । प्रायः कविहरु केवल एउटा विषयमाथि मात्र कविता कोर्न रुचाउँछन् । ती कविहरुका कविता एउटै विषयको वरिपरि फनफनी घुमिरहेका हुन्छन् । पाठकहरु पनि एउटै विषयमाथिको कविता पढ्दा-पढ्दा वाक्कै बन्छन् र एउटा निष्कर्षमा पुग्छन्-अब कहिलै पनि कविता नपढने । तर प्रकाशको जम्मा-जम्मी २० ओटा कविताहरुमा पनि मैले धेरै विषयहरुमाथि पढ्ने मौका पाएँ । प्रकाशले आफ्नो कलम धेरै विषयहरुमाथि चलाएका छन् । विषयको विविधताले यो कृतिलाई संग्रहणीय बनाएको छ ।
कविले आफ्नो कविता संग्रहको पहिलो कवितामा माया-पिरतीका कुरा गरेका छन् र विपरीत लिङ्गी युवक-युवतीबीच प्रेमको बीज अङ्कुरित गर्ने थुप्रै कारणहरुमध्ये एउटामा प्रकाश पारेका छन् :-
बागबजारको सडकपेटीमा हाम्रो जम्काभेट हुन्छ,
केही छिनलाई हाम्रो आँखा चार भएर सुखद दुर्घटना हुन्छ ।
त्यसपछि क्रमशः प्रेमी जोडीले टाढिनु पर्दा सम्झनाले उनीहरुलाई कसरी सताउँछ र माया-प्रेमको खेलमा धोखा नामक दुर्घटना घटे जीवनभरि के-कस्तो प्रभाव पर्छ, भन्ने विषयमा लेखेका छन् :-
सत्ते म तिम्रो सम्झनामा यहाँ
झरेको साकुराझैं क्रमशः सुक्दै गईरहेछु ।
- (निर्वासनमा तिम्रो याद)
गएर हेर्नु है नबिर्सी,
हेर्नु एकैछिन उभिएर,
हाम्रो मायाको निसानी
बर-पीपल उम्री सुरक्षित छ अझै ।
- (सोल्टिनी )
प्रकाशले आफ्ना कविताहरुमा गाउँ-शहरमा भेटिने गरीबको आँसु र व्यथाको कुरा लेखेका छन् । यो वर्गले जीवनलाई जसरी देखेका र बाँचेका छन्, कविले त्यो जीवनको कथा हामीलाई सुनाएका छन् :-
उसले भारी बोक्न छोडेको छैन
फिदिम-याङनाम भारी खेप्छ
र दिनको पचास कमाउँछ ।
- (बलिहाङ लिम्बू )
साथै भट्टी पसलको भक्तपुरे ठर्रा, दुर्गन्धित बागमति, छली सहर, भद्रकालीमा बस्ने अनसन र सधैं जसो ओहोर-दोहोर गर्नु पर्ने बागबजारको सडकपेटीले हामी नेपालीलाई कतै न कतै छोई रहेको नै हुन्छ :-
यहाँका कङ्क्रिट महलहरु
मेरो गाउँको झुप्रो भन्दा सुन्दर छैनन्
यहाँका मायावी सुख सयलहरु
मेरो आमाको काखभन्दा आत्मीय छैनन् ।
- (बिरानो सहर )
बागमती किनारमा दुःखले बनाएको
छाप्रो भत्काउने क्रूर शासक
आधा तलब नबुझाएको निहुँमा उठिबास लगाउने
सबै सबैसँग झोँक चल्छ
मात्र झोँक चल्छ ।
- (कालो रात र किरा )
कविले आफ्ना कविताहरुमा देशको वर्तमान अवस्थाको सही चित्रण गरेका छन् । विगत १०-१२ वर्षको माओवादी द्वन्द्वले ल्याएको अवस्थालाई आफ्नो कवितामा स्थान दिएका छन् :-
बतासे डाँडामा मनमोहक फुल्ने
बुकी फूलको मधुरिमा पनि
आजकल एम्बुसमा परेर घाइते छ रे
मधुश्रीमा आफ्नो जीवनको गीत गाउने कोइली पनि
छर्राको डरले बसाइँ सर्‍यो रे ।
- (एसिड वर्षा र मेरो गाउँ )
इराकी फतीमा, प्यालेष्टनी जामीला, गुजरातमा घटेको हिन्दू-मुस्लिम बीचको जातीय दंगा, कोसोभोको गृहयुद्घ र ट्वीन्स टावरमाथिको आतँकवादी आक्रमण जस्ता प्रसँगहरुले प्रकाश साँच्चै समय सचेत कवि हुन भन्ने आभास भई रहन्छ । कविले हिटलर, पोलपोट, इदी अमिन जस्ता निरंकुश शासक र उनको तन्त्रमाथि आफ्नो कलमले जोरदार प्रहार गरेका छन् :-
चैत-वैषाखको हुरीले नभए
समयको अपरिहार्य मागले
हेर्दै जाऊ है
अब त्यो सालिक ढल्छ-ढल्छ ।
- (अब त्यो सालिक ढल्छ)
मलाई सबैभन्दा राम्रो लागेको चाहिं, कविले आफ्नो लिम्बू सँस्कार र सँस्कृतिको बारेमा लेखेका छन्-भए न त रंगीन कविताहरु एउटै संग्रहमा ? यी रंग-विरंगी कविताहरु पढ्दा कुनै काव्य बागमा विचरण गरिरहेको अनुभव हुन्छ । प्रकाशले आफ्ना कविताहरुमा पक्लुङ खेल्ने कुरा कोरेका छन्र्, ईक्साको चुल्ठोको नुमाफुङ सजाएका छन्, बलिहाङको निर्दोष मुस्कान सम्झेका छन् , खुङखोलामा माछा मारेका दिनहरु फिर्ता ल्याएका छन् र च्याङबु्रङ बजाउँदै रमाइलो गर्ने समाज उतारेका छन् । कविले आफ्ना कविताहरुमा धान नाच्ने सोल्टा-सोल्टिनीको बारेमा भनेका छन्, हामी पाठकहरुलाई पूर्वेली रामनवमीहाट घुमाएका छन् र किराँती इतिहासका एकलव्य, काङसोरे र बलिहाङ जस्ता युग पुरुषहरुसित भेटाएका छन् । साथै जोखना हेर्ने फेदाङमा, फाक्ताङलुङ र गर्वले ठडिएको चामोलङ्मा बारे कविता रचेका छन् र सबै भन्दा महत्वपूर्ण त कविता संग्रहको शीर्षक नै छ ‘पालामको मूर्च्छना’ ।
अब भाकेर सेसेमाङ
तितेपाती र्छर्की पवित्र हुन्छु
सदियौँदेखि सहनसम्म सहियो
आदिका नियतिहरु ….
- (विभेदको भाइरस र दल्छिनढुङ्गा )
कविले आफ्नो उमेरका युवा पुस्ताले सामना गर्नु परेको बेरोजगारी समस्या, भाइ-भतिजावाद र नातावादले बेरोजगारहरुमा उत्पन्न हुने नकरात्मक मनोदशालाई पनि समेटेका छन् :-
र असंतुष्टीमा च्यात्छु योग्यताका फाइलहरु
अब यसको कुनै अर्थ छैन
केवल फोस्रो कागज ।
साथै, हाम्रा नालायक नेताहरुका बारेमा सही चित्रण गरेका छन् । कवि यिनको गुण-व्यवहारबाट चकित भएर सोध्छन् :-
सद्दे मान्छे किन पागल हुन्छ ?
लुते मान्छे किन खुङ्खार बन्छ ?
भावुक मान्छे किन क्रूर बन्छ ?
- (देश अझै बिरामी छ )
यीलगायत कविले समावेशी लोकतन्त्र, जातीय स्वयत्तता, संविधान सभा, अन्तरिम संविधान जस्ता शब्दहरुको प्रयोगले यतिका वर्षसम्म दबिएका र पिछडिएका नेपाली जनतालाई सचेत गर्दै ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको लागि आहवान गरेका छन् :-
खुल्लामञ्चमा उभिएर म
उन्मुक्तिको, निस्सीमताको, स्वतन्त्रताको भाव बोकेको
नवीन प्रजातन्त्रको गीत गाई रहेछु
- (नवीनताको शङखघोष )
अन्तमा, प्रकाशका कविताहरु सरल छन् तर भाषाशैली चाहिं बेजोड । कवि आफै पनि राम्रा कविताको नाममा कठिन शब्द र जटिल बिम्बहरुको प्रयोगले आफ्ना कविताहरुलाई बौद्धिक विलासिता बनाउने पक्षमा छैनन् । कविको आफ्नो भनाइमा प्रायः कवि र लेखकहरु चरम बौद्धिकता अँगाल्ने लोभमा पाठक र समाजभन्दा बीस कदम अगाडि बढ्छन् । यसको परिणामस्वरुप पाठकहरु र कविताको बीच दूरी बढ्दै जान्छ र कविता एक्लो पर्छ । भन्नु पर्दा, सम्पूर्णरुपले ‘पालामको मूर्च्छना’ पढेपछि म यो निष्कर्षमा पुगें कि प्रकाशले आफ्ना कविताहरुमा हाम्रो समाज, हामी बाँचेको युग, स्थान र समयलाई राम्रोसित अठ्याउन भ्याएका छन् । अन्तमा, कविकै शब्दहरु सापटी माँगेर बस : यति भन्छु -सेवारो (अभिवादन) प्रकाशका कविताहरु ।
मानवशास्त्रको एक विनम्र साधक साथै एक भारतीय नेपालीको चिनारी बोक्ने अथवा बोक्न चाहने व्यक्तिको हैसियतले आज यहा“हरूसमक्ष केही कुरा राख्न चाहन्छु ।
आजको नेपाललाई नेपालबाहिरबाट हर्ेदा कस्तो देखिन्छ, त्यसबारे केही भन्ने सोचेको छु । मेरो व्यक्तिगत हेराइमा आजको नेपाल सम्पर्ूण्ा रूपले अनिश्चितताले घेरिएकेा देश देखिन्छ । हुन त अनिश्चितता बोक्ने देश नेपालमात्र होइन । धेर-थोर समयको निम्ति प्रायः सबै देश अनिश्चित रहेको सबैलाई याद छ । अनिश्चितताबारे बुद्धिजीवीका धारणा पनि समान नभएको धेरैलाई थाहा होला । कति बुद्धिजीवी त अनिश्चिततालाई पुज्ने पनि हुन्छन् । नपुजून् पनि किन - अनिश्चततामा जुन रोचकता हुन्छ, ताकत हुन्छ, कल्पना हुन्छ र नया“ कुरा सुरु हुने सम्भावना हुन्छ, त्यो निश्चिततामा हु“दैन ।
एक आधुनिक राष्ट्रको नाता अनिश्चततासित धेरै लामो हुन सक्दैन । केही महिना वा वर्षो अनिश्चितताले त्यति ठूलो नोक्सान गर्दैन तर अनिश्चितता राष्ट्रको मूलधारा बन्न गए त्यो चिन्ता र चिन्तन दुवैको विषय बन्न जान्छ, किनकि लामो अनिश्चितताले धेरै प्रकारका अनिश्चितता सिर्जना गर्छ र बिस्तारै-बिस्तारै ती सबै प्रकारका अनिश्चिततामा एकप्रकारको अन्तर-निर्भरता तयार हुन थाल्छ, जसलाई तोड्न सबै राष्ट्र सक्षम हु“दैनन् । सक्षम नभए यस्तो राष्ट्र विकासोन्मुख नभएर विनाशोन्मुख हुन जान्छ जो अनिश्चितता ल्याउने तत्त्व निम्ति पनि लाभदायक हु“दैन ।
यसरी अनिश्चितताले लामो घर्ेदा त्याग्न चाहेका-लागेका कतिपय व्यवस्थाले फेरि शिर उठाउने मौका पाउ“छन् किनकि प्रत्येक व्यवस्थाले कसैलाई फाइदा त कसैलाई नोक्सान पुर्‍याएको हुन्छ । नेपालमा आज त्यस्तो प्रकरण सुरु भइसकेको छ र त्यस्तो प्रकरण जीवित राख्न चाहने तत्त्व सदैव जीवित र जीवन्त हुन्छन् । अतः आज नेपालअघि कुनै पनि आवश्यक कार्य छ भने त्यो हो आजको अनिश्चिततादेखि बाहिरिनु । त्यो हुन नसके 'देशवासीनिम्ति वा वासी देश निम्ति' हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । वासी नै नरहे देश रहन्न, तर विनादेशको वासी हुन्छ, यद्यपि विनादेशको नागरिक भने हु“दैन ।
यस अनिश्चिततादेखि बाहिरिने धेरै उपाय छन् तर ती उपाय खोज्न अनि अपनाउन आजका नेता औ बुद्धिजीवीले जति कोसिस गरेका छन् त्यति पर्याप्त भए जस्तो लाग्दैन । अझै पनि उनीहरूले यथेष्ठ मात्रामा आफ्ना विभिन्न प्रकारका स्वार्थ त्याग्न सकेका छैनन् जस्तो लाग्छ । राष्ट्रहित अझै पनि अन्य हितभन्दा माथि, अलग्गै उभिएर आएको देखि“दैन तर त्यो हुनु जरुरी छ आजको नेपालमा ।
नेपाली जाति भनेको आफैंमा मग्न हुने जाति हो, मर्ूखलाई बुद्धिमान् नाम दिने जाति, अनि गरिबलाई धनवीर नाम दिएर ढुक्क हुने जाति । दोहोरो हामी कम सोच्छौं । भविष्यवाणी हामी गर्र्छौं, भविष्यबारे भने कमै सोच्छौं । हाम्रो समालोचना कसैले गरे त्यसलाई शत्रु ठानिहाल्छौं । यस्तै जाति भए पनि आजको नेपालको हल यही जातिबाट निस्कनेछ । त्यो हल आकाशबाट टप्कने होइन, न त्यो उत्तर वा दक्ष्ँिणबाट आउने हावास“ग उडेर आउने हो । हल यहा“कै माटोबाट पैदा हुनर्ुपर्छ, यहा“कै हावापानी सुहाउ“दो । आज नभए भोलि त्यो हुन कर लाग्नेछ ।
आजको अनिश्चिततादेखि बाहिरिन र्सवप्रथम आफ्ना जाति र देशप्रतिका धेरै धारणा जति सजिलै त्याग्न सक्यो त्यही फाइदामन्द हुन्छ । नेपालीलाई 'वीर-गोर्खा' भनेर अंग्रेजले र्सकाउनसम्मै र्सकाएर पुस्तक, लेख नलेखेका होइनन् । त्यो पढेर अनि त्यसलाई ध्रुव-सत्य मानेर गजक्क हुन आजको नेपाली जातिलाई सुहाउ“दैन । त्यसरी नेपाललाई कुनै विदेशी शक्तिले कहिल्यै अधीनमा ल्याउन सकेन भनेर गर्व नगरेर यस्ता शक्तिले देश खोक्रो पारिसकेको देख्न सक्नर्ुपर्छ । आजको नेपालीले उपनिवेशवादले लिएका नया“ अनि अदृश्य रूप देख्न सक्नर्ुपर्छ । पहाड-मधेसको दूरत्व, स्त्री-पुरुष उ“चनीच र जात-पात भेदभाव हटाउन नसके पनि कोसिस गर्नुपर्छ । तब नेपाल गर्व गर्न लायक हुन्छ ।
आजसम्म नेपालबाहिरका नेपाली निम्ति नेपाल एक गरिब, पछौटे देशका रूपमा खडा छ । यसैले मैलो, फाटेको झुम्रो लाएकी आमालाई नचिन्ने छोराछोरीझैं नेपालबाहिरका धेरै नेपाली नेपालस“गको ऐतिहासिक, भाषिक, सांस्कृतिक नाता नकार्ने गर्छन् । यसमा नेपालका नेपालीले दुःख मान्ने कारण देख्दिन“ किनकि हार्नेस“ग केवल सहानुभूतिको सम्बन्ध हुन्छ चाहे तिनीहरू आफ्नै हुन् वा होइनन् । गर्व त जितस“गै जोडिएको हुन्छ ।
यसकारण नेपालले सम्पर्ूण्ा नेपाली जातिको गर्व हासिल गर्न चाहेको खण्डमा अहिलेको आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक इत्यादिको पछौपटेपनमाथि विजय प्राप्त गर्नुपर्‍यो । आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुपर्‍यो न कि अन्तर्रर्ााट्रय अनुदान नामक बैसाखी लिएर । खेल, साहित्य, संगीत, कला, विज्ञान वा ज्ञानको क्ष्ँेत्रमा अन्तर्रर्ााट्रय ख्याति प्राप्त गर्नुपर्‍यो । बुद्ध भगवान् जन्मेको देश भनेर मख्ख नपरेर शान्ति वहाल गर्न सक्नुपर्‍यो । संसारको सबैभन्दा उचो माउन्ट एभरेस्ट भएको देश भनेर खुसी भएर होइन, जात-पात, भेक-भेष, भाषा-भाषीको उचाइमाथि उभिएर देखिन सक्नुपर्‍यो ।
यति लामो इच्छा-सूची देखेर नेपालका बुद्धिजीवी नअत्तालिए हुन्छ किनकि यी चाह“दैमा भइहाल्दैन भनेर सबैलाई थाहा छ । समय चाहिन्छ, धर्ैय चाहिन्छ, सबैभन्दा पहिलो यस्तो नेपालको कल्पना चाहिन्छ । कल्पना गर्न सके आधारशिला राख्न समय लाग्दैन । आधारशिला स्थापना भइसकेपछि भवन निर्माण ढिलो वा छिटो हुने नै हो । त्यसकारण उज्ज्वल भविष्यको सपना होइन, कल्पना गर्न थाल्नुपर्‍यो ।
-डा. सुब्बा भारतको पूर्वोत्तर राज्य मेघालयको शिलङस्थित र्ँनर्थ-इर्स्र्टन हिल युनिभर्सिटी’ मा सामाजिक मानवशास्त्रका प्रँध्यापक हुन् । शनिबार ललितपुरमा जगदम्बा श्री तथा मदन पुरस्कार वितरण समारोहमा मुख्य वक्ताका रूपमा उनले दिएको मन्तव्यको यो मुख्य अंश हो ।)े
On the dark road of life
I feel successis
lit likealamp with the dynamo ofabicycle
my legs rise and fall
pushing the pedal s
the lamp-lit-path falls beneath me
But as soon as I tire
and my feet slow toahalt
in front of me jumps darkness
translated by Wayne Amtzis